Askar horay udishay dad rayid ah oo maanta Muqdisho lagu toogtay
Home Somali News Askar horay udishay dad rayid ah oo maanta Muqdisho lagu toogtay
Ilaa iyo sadex Askari oo mid Sarkaal yahay ayaa maanta maxkamada Ciidamada qalabka sida ee doowlada Soomaaliya, waxay ku fulisay dil toogasho ah, Askartaan ayaalagu eedeeyay ineey dileen dad shacab ah oo an waxbo galabsan.
Labo kamid ah Askarta maanta la toogtay oo wada dhashay ayaa lagu helay danbi ah in 4 ruux oo barakacayaal ah ay ku dileen degmada Howlwadaag, halka sarkaalkana lagu eedeeyay inuu dilay askari katirsan Ciidamada doowlada.
Gudoomiyaha maxkamada sare ee Ciidamada qalabka sida Xasan Maxamed Xuseen muungaab, oo arintan bahda saxaafada uga warbixayay ayaa sheegay.
“Maxkamada Cidiamada qalabka sida waxay maanta 3 danbiilayaal ah ku fulisay xukun dil ah oo horay loogu xukumay, kadib markii ay dil barer ah u gaysteen dad aan waxbo galabsan” sidaa waxaa yiri Muungaab.
Maxkamada Ciidamada qalabka sida ayaa dhowr jeer ooh ore xukuno dil ah ku fulisay Ciidamada doowlada.